.NET နှင့် ML.NET: Microsoft Open Source ပလက်ဖောင်းများ Linux မှ
ကျနော်တို့ပြီးသားခေါ်ထုတ်ဝေအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ် "War မှာစစ်ဆင်နေတဲ့ Operating Systems - လူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်!"လောလောဆယ် «Microsoft»၏ကုမ္ပဏီ Redmond, USAပိုင်ရှင် «Windows» သည်အခြား Operating Systems ၏အကောင်းဆုံးများကိုသိမ်းပိုက်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့ထံတင်ပို့ရန်အတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုလမ်းအတွက်, တင်ပို့ပြီးသားလူသိများပရိုဂရမ်များမှလွဲ။ «GNU/Linux»လက်ရှိအခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည်။ «SQL Server, .Net, Visual Studio Code y Skype»။ နောက်ဆုံးထည့်သွင်းအဖြစ်တ ဦး တည်းအဖြစ်လူသိများ «Microsoft Teams»ကျနော်တို့တ ဦး တည်းကိုပိုမိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ။ ယခုမှာ၎င်းသည်ငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့၏ «ML.NET», un စက်သင်ယူမူဘောင် de «Código Abierto» နှင့်ဖြည့်သော multiplatform «.NET».
ဖြစ်နိုင်၏လျှောက်လွှာများဤတစ်ခုလုံးကိုကြီးထွားလာဂေဟစနစ် «Código Abierto» တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက် join «Navegador Edge» နှင့် «Antivirus Defender»။ အဘယ်သူသည်ဝင်ငွေနှင့်အတူယခုရုတ်တရက်သိတယ် «Microsoft Teams» ကြည့်ရတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး «Suite Ofimática MS Office» သို့မဟုတ်ဤအဘို့အလွန်ဆင်တူသို့မဟုတ်အနီးကပ်တစ်ခုခု «GNU/Linux».
0.1 Microsoft ကပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်း
0.2 .NET ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
0.3 ML.NET ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကျနော်တို့ပြီးသားပြောခဲ့သကဲ့သို့, များစွာသောအကြား software (အစီအစဉ်များ၊ စနစ်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများ) de «Código Abierto» မကြာသေးမီက «Microsoft» ရန်လှူဒါန်းခဲ့ခဲ့သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto», ထင်ရှားသည်:။NET နှင့် ML ။NET
၎င်းသည် Multiplatform Development ပလက်ဖောင်း (Windows, Mac OS နှင့် Linux) ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး desktop, mobile, web, games နှင့် internet အရာများတည်ဆောက်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော application များကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများ၊ အယ်ဒီတာများနှင့်စာကြည့်တိုက်များကိုအမျိုးမျိုးသော application များအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ ဘာသာစကားတွေထဲမှာ -
C #: ရိုးရှင်းပြီးခေတ်မီ။ အရာဝတ္ထုကို ဦး စားပေးပြီးလုံခြုံသောပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဖြစ်သည်။
F #: ဘယ်ဟာ .NET အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ cross-platform နှင့် open source programming language ဖြစ်သည်။ ဘယ်အရာဝတ္ထု -oriented နှင့်အလွန်အရေးကြီးသည် programming ကိုလည်းပါဝင်သည်။
Visual Basic ဘယ်အမျိုးအစားကလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအရာ ၀ တ္ထု -oriented applications များတည်ဆောက်ရန်ရိုးရှင်းသော syntax နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Cross Development Platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါဘာသာစကားများဖြင့်ဖန်တီးထားသော application များကိုမည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သော Operating System တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်ခွင့်ပြုထားသဖြင့်၊
Net Core: ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဆာဗာများနှင့် console အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
.NET မူဘောင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ desktop application များနှင့် Windows တွင်များစွာအဆင်ပြေသည်။
Xamarin / Mono: အဓိကမိုဘိုင်း Operating Systems တွင် application များကို run ရန် .NET အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၎င်းတွင် .NET အကောင်အထည်ဖော်မှုအားလုံးအတွက်အသုံးများသောအခြေခံ APIs များပါရှိသည်။ ထို့အပြင်အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုစီသည်၎င်းတို့လည်ပတ်မည့် Operating Systems နှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ် APIs များကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် .NET Framework ဆိုသည်မှာ Windows Registry ကိုကြည့်ရှုရန် APIs များပါ ၀ င်သော Windows တစ်ခုတည်း .NET အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ထားသောကြီးမားသောစာကြည့်တိုက် (ဂေဟစနစ်များအထုပ်များ) ရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအသုံးချရန်သင်အတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားသော package manager ဖြစ်သော NuGet ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် «.NET» 90.000 ကျော် packages များပါဝင်သည်။
မှတ်စု: ပိုမိုသိရှိလိုပါက «.NET» မင်းရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ ဒီမှာ.
၎င်းသည်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်၊ cross-platform စက်သင်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်e သည် Windows, Linux နှင့် .NET Core ပါသော MacOS သို့မဟုတ် .NET Framework ကို အသုံးပြု၍ Windows တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည် .NET ဖြင့်ဖန်တီးထားသော application များ (အွန်လိုင်း (သို့) အော့ဖ်လိုင်း) တွင်စက်သင်ယူမှုကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည် လိုအပ်သောဒေတာနှင့်အတူအလိုအလျှောက်ဟောကိန်းများပါစေ။
အဖြစ်ရှိပါတယ် အခြေခံက modelo ကြောင်းစက်သင်ယူ တစ် ဦး ခန့်မှန်းသို့ input ကိုဒေတာအသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းများသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းသည်သင် TensorFlow နှင့် ONNX ပလက်ဖောင်းများမှရရှိနိုင်သည့်၊ ဖန်တီးပြီးသားတီထွင်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် algorithm ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံကိုလေ့ကျင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
64-bit version သည် platform အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ TensorFlow, LightGBM နှင့် ONNX တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမှအပ 32 bit version သည် Windows နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ထံမှကိုးကား «Microsoft»နှင့်အတူလုပ်နိုင်သောဟောကိန်းများ၏ဖြစ်နိုင်သောဥပမာအချို့ «ML.NET» သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းတန်ဖိုးများ အရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အိမ်စျေးနှုန်းများကိုခန့်မှန်းပါ။
Anomaly ထောက်လှမ်း လိမ်လည်လှည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအရောင်းအဝယ်ကို detect ။
အကြံပြုချက်များ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူများ ၀ ယ်ယူနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများအားယခင်ဝယ်ယူမှုများအရအကြံပြုပါ။
အချိန်စီးရီးနှင့် sequential ဒေတာ ခန့်မှန်းချက်ရာသီဥတုနှင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းအား
ပုံရိပ်ခွဲခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ရောဂါဗေဒ Classify
မှတ်စု: ပိုမိုသိရှိလိုပါက «ML.NET» မင်းရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ ဒီမှာ.
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ်" ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်း ၂ ခု «Plataformas de desarrollo y Machine Learning de código abierto» de Microsoft က ကိုခေါ် «.NET y ML.NET»များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများအကြား၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်း (ကျစ်လစ်သိပ်သည်း), ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းရည်တစ်ခုလုံးအဘို့, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကို၏ဖြစ်ကြသည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » .NET နှင့် ML.NET: Microsoft Open Source ပလက်ဖောင်းများ
Rambler သည် NGINX နှင့် ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုမှုသည်မမှန်ကန်ပါ။ သူသည် Twitch ကိုတရားစွဲဆိုထားသည်
Wireshark 3.0.7 သည်လုံခြုံရေးအမှားများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်